Natiijooyin ka dhashay PMTO - Guulaha la gaaray - pmto.no
Halkan ayaad joogtaa: Bogga hore / Guulaha la gaaray / Natiijooyin ka dhashay PMTO
"Wax badan ayaa dhacay taniyo markii aan bilaabey ka qaybgalidda PMTO. Qof ayaa meesha ii joogey waalid ahaan. Dhab ahaantii waan murugaysanaa, caqabado waaweyn ayaa i haystay waxaanan kari waayey in aan ku farxo cunugayga... Way adag tahay in aan si cad u qeexo qiimaha ay PMTO ii lahayd waalid ahaan."
"Xaaladaha hadda way deggan yihiin. Waxa aan ka kaaftoomay in aan maago ama aan qayliyo. Waxaan ka fiirsadaa ereyada aan adeegsanayo. Gurigayagu wuxuu noqdey meel wanaagsan oo la joogo. Waa meel la isku waafaqsan yahay."
"Waxa annu raadinaynay qalab aan ku xallino dhibaatada cunug aan korsaneynay ooh awl badan naga haysatay. Waxaan dareenay in is-dhin xaddi badan ku yimi xaaladaha adag sida doodaha, qaylin, albaab garaacid iyo diidmada ah in uu sameeyo waxa la faro."
"Si dheeraad ah ayuu noo ixtiraamaa marka hadalkayagu cad yahay, oo aannaan la gelin dodo adag. Kolay annaguna ixtiraam dheeraad ah ayaannu shakhsiyadiisa u yeelanay, waanuna ku sii wacnaanay dhegaysiga.”
"Wakhtiyadii hore waxaa la ii sheegay in aan ahaado qof aan isbeddelin. Laakin qofna iima sheegan waxa taasi loola jeedo... waxaan isku dayay xeelado kala duwan, kuwaas oo xaaladda gurigeena ka dhigay mid aan la saadaalin karin. Dhammaadkii, waxaan noqdey qof ad-adag waxaana isku dayay in aad qaado khad adag. Dhibaatadu way ka sii dartey, jawiga gurigana wuxuu ahaa mid kacsan oo xun. Caawimaadda aan ka helnay PMTO waxay noqotey mid aan la qiimeyn karin."
" Waxaan bartey wax badan oo aniga igu saabsan, waxaana dhihi karaa in barnaamijka PMTO uu igu caawiyay in naf-ahaanteyda aan isdhiso si la mid ah sida ay iigu caawisay in aan noqdo hooyo waadix u ah wiilasheyda."
"Waxaan dareenay in PMTO uu yahay mid faa'iido iyo waxbarasho leh. Hadda waxaan haysanaa aasaas aan wadaagno oo ah ka jawaab-celin isku mid ah, oo marka aannu PMTO adeegsano. waxannu isaga siinaa kana qaadnaa jawaab-celin iyo tallaabo isku mid ah ama amaan. “
"kalhore, aniga marmarka qaarkood waxaan dareemay in caloosheyda is gunnudo marka aan maqlo asagoo jooga dibadda albaabka, asagoo soo geleya. Hadda, waxaan si daacadnimo ah u dhihi karaa in aan farxo marka aan maqlo asagoo dugsiga ka imaanaya."
"Noolal maalmeedkeena waxay noqotay mid fudud. Anigu hadda ma galo dood kumana mashquulo wax aan faa’ido lahayn, laakiin waxaan dareemaa kalsooni dheeraad ah waxaanan garanayaa waxa iyo sida loo xalliyo xaalado kala geddisan. PMTO waxa ay i siisay kalsooni badan oo ah xagga doorkeyga waalidnimo, waxaanay gacan ka geystey in cunugaygu uu dego si aad ahna u qanco ama uu farxo."
"Daaweeyaha PMTO waxa kale oo uu kullamo wada-shaqeyn ah la qaatay dugsiga, waxaana u aragney in tani ay ahayd mid aad u fiican."
"PMTO wuxuu noqday qayb ka mid ah noolasheyda. Waxaan isticmaalaa waxa aan bartey maalin kasta, waxaana ka gudubnay in aan ku jirno shar isdaba-joog ah waxaana u gudubnay wanaag. Hadda, waxaan nahay kuwo aad u faraxsan oo hubaal ah. Sidii waalid ahaan waxaan garaa go'aanada, balse waxaan sidoo kale dhageystaa waxa cunugayga uu leeyahay, wada-shaqeyntana waxay noqotay mid muhiim ah."
"Kullamada PMTO waxa ay waalid ahaan ila ahaayeen kuwo waxbarasho leh isla markaana xiiso leh leh oo wanaagsan, waxaanan ku dhiirigelinayaa in la fidiyo xogta ku saabsan PMTO sicay waalidiin badan u heli karto caawimaad."